HomeWararka CiyaarahaChelsea iyo Liverpool oo loo sheegay Qiimaha ay ku heli karaan Domenico Berardi
July 25, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea iyo Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in lagu wargaliyay in Sassuolo ay doonayso lacag dhan 40 milyan oo euro (34.3 milyan oo euro) si ay uga iibiso Domenico Berardi inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
26 jirkaan ayaa ku riyaaqay xilli ciyaareed cajiib ah 2020-21 heer kooxeed, isagoo dhaliyay 17 gool isla markaana diiwaan geliyay sideed caawin 30 kulan oo Serie A ah.
Weeraryahanku wuxuu sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaray guushii Talyaaniga ee Euro 2020, isagoo ka soo muuqday lix ka mid ah toddobadii kulan ee ay ka ciyaareen tartanka, oo uu ku jiro finalkii England ee Wembley bishii July 11.
Chelsea iyo Liverpool ayaa labadoodaba lala xiriirinayaa Berardi, kaasoo la sheegay inuu doonayo inuu koox cusub u raadsado inta lagu jiro suuqa hadda.
Sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport , Sassuolo ayaa diyaar u ah inay iska iibiso tababaraha reer Talyaani xagaagan haddii ay helaan dalab of 40m (£ 34.3m).
Borussia Dortmund ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay dooneyso inay la soo wareegto Berardi, kaasoo weli seddex sano ay uga hartay qandaraaskiisa kooxda Alessio Dionisi .